ကောင်းကြသေးရဲ့လားအရပ်ကတို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » ကောင်းကြသေးရဲ့လားအရပ်ကတို့
Posted by kokothandar on Aug 24, 2011 in Critic |7comments
အခွန်အတုတ်တွေပြည်သူတွေအပေါ် ဒဏ်ပိစေတဲ့အဖြစ်တွေမှာ အခွန်ကောက်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလေလံပစ်တာလဲပါပါတယ်… လမ်းတံတားဖြတ်သန်းခတွေ..ကားရပ်နားခတွေ. .လေလံဆွဲသူတွေကောက်ချင်သလိုကောက်တော့ခံရတာပြည်သူ… စံစားရတာကလုပ်ငန်းရှင်ငွေရှင်တွေဖြစ်နေတယ်.. ငွေရှင်တွေကိုလုပ်ကွက်တွေဖေါ်ပေးနေသလိုပါဘဲ. .လေလံပစ်လို့ရနိုင်တဲ့ပမာဏကို ယာဉ်စီးရေနဲ့စားပြီးကြိတ်နှုန်းသဘောနဲ့ ယာဉ်တွေလိုင်စင်ဝင်တဲ့ အခါကောက်လိုက်ရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလား. .သွားလာသူတွေလဲခရီးမဖင့်.စိတ်ပေါ့ပါးစွာနဲ့ခရီးသွားလို့ရပြီပေါ့. .
လာပြန်ပြီမီးရထား… ကိုယ့်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံတာကိုမပြင်ဘဲ ငွေရှင်တွေ လက်ထဲအပ်ဖို့ြ့ပင်နေတယ်. .ဒါဆိုရင်မီးရထားဝန်ကြီးဌာနကိုပါဖျက်လိုက်ရင်မကောင်းဘူးလား.. .ပြည်သူတွေရဲ့သက်သာချောငိချိရေး ကိုဆောင်ရွက်ဖို့တာဝန်မယူချင်တော့ တာလားသယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ်တွေနဲမှ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေတည်ငြိမ်မယ်ဆိုတာနားမှမလယ်ကြဘဲကိုး
အဓိက က စာကြောင်းမှာ ကွက်လပ် spacing မပေးတဲ့အတွက် ဘေးထွက် စာကျန် ဖြစ်ကုန်တာ
spaceတွေလည်းမခံဘူး enterလည်း မခေါက်တော့ စာလုံးတွေဘေးချော်နေပါတယ်
နောက်ဆို.. အပေါ်က.ရွာသားတွေပြောတဲ့အတိုင်း… သတိလေးထားပေးပေါနော…။
ရေးချင်တာက..အမြတ်ခွန်ကောက်တာနဲ့.. လုပ်ငန်းရှင်တွေကို.. ကန်ထရိုက်ပေးတဲ့အကြောင်းထင်တယ်..
နည်းနည်းလေး.. ရှည်ရှည်.. လူအများ သဘောပေါက်အောင်ရေးပေးစေလိုပါကြောင်..။
အော် အခွန်တွေ ကြောင့်တော့ခက်တယ်……..
ပြည်သူတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက် ပေါ့နော်……. နောက်ပိုင်း မကြာတော့ခင်ကာလ လေးမှာ ခုထက်ပိုဆိုးတဲ့ အခွန်အတုတ်တွေ
ဖြစ်လာတော့မလား တွေးပူမိတယ်…. တွေးမိရင် ကျပ်သိပ်မွန်းသလို ခံစားနေရတယ်…။
ကိုပင်လယ်ပျော် ပြောတယ်နော်။နောက်ပိုင်းအခွန်အတုတ်တွေများလာတော့မှာလေ။ဟုတ်တာပေါ့. တိုင်းဒေသကြီး သို ့မဟုတ်ပြည်နယ်တွေဟာ လာမယ့်အောက်တိုဘာလ ရောက်ရင် ကိုယ်ပိုင်ဘားဂျက်နဲ ့စခန်းသွားကြရမှာ။ကဲ—-ဘယ်လိုလဲ. ဘယ်ကိုသွားမလဲမေးကြည့်ကြပါ။အခွန်အတုတ်တွေဘဲပိသေမှာလား၊လူပိသေမှာလား စောင့်နေပေရော့—စိတ်ပျက်ပါတယ်နော်.